ပိုးစုန်းကြူး: ဘာကြောင့် ချစ်ခင်သူလိုအပ်ရတာလဲ
မြန်မာလူမျိုးများ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်လျက်............................
လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း နေလို့မရပါဘူး။ မိသားစု၊ ဆွေမျိုး၊ အပေါင်းအသင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း စတဲ့ ကိုယ်ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ဘဝကို လျှောက်လှမ်း ဖြတ်သန်းကြရပါတယ်။ ချစ်ခင်သူတွေက သင့်ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မျှဝေခံစားဖို့၊ သင်အားငယ်ချိန်မှာ အားပေးဖို့၊ သင့်အောင်မြင်မှုကို မုဒိတာပွားပေးဖို့၊ သင်ရှုံးနိမ့်ချိန်မှာ ဖေးမကူညီပေးဖို့ သင့်အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်တာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် ချစ်ခင်ရတဲ့သူပါ။
သင့်အလုပ်မှာ မတော်တဆ အလွဲအမှားတစ်ခုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မဲ့သွားတာလား၊ အလုပ်ရှင်ဆူခံရလို့ စိတ်ပျက် အားငယ်သွားတာလား၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေ ထိုးနှက်မှုကြောင့် စိတ်ဓာတ် ကျနေတာလား။ ဒီအချိန်မှာ သင်လုပ်သင့်တဲ့အရာက အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုံးထိ ရှူသွင်းပြီး သင်ချစ်ခင်သူဆီ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။ အချိန်မရရင် ဖုန်းထဲကပဲ ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ အချိန်ရခဲ့ရင်တော့ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောနိုင်မယ့် နေရာတစ်နေရာကို ချိန်းဆိုပြီး သင့်ရဲ့ စိတ်ပျက်အားငယ်မှုတွေကို ပြောဆို တိုင်ပင်လိုက်ပါ။ သင်ချစ်ခင်သူဆီက အားပေးစကားကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည် တည်ဆောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ တိုင်ပင်ဖော်၊ တိုင်ပင်ဖက်
တစ်ခါတစ်ရံ တချို့နေရာတွေကို တစ်ယောက်တည်းသွားဖို့ အခက်အခဲ ရှိတဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်ချစ်ခင်သူက သင့်အတွက် အဖော်မွန်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်စေမှာပါ။ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ သင်နဲ့အတူ သင့်ချစ်ခင်သူက တိုင်ပင်ဖော်၊ တိုင်ပင်ဖက်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်စေသလို၊ အခမ်းအနား တက်ရောက်ရတဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း သင့်ကို မဝံ့မရဲမဖြစ်စေဘဲ လူတောတိုးရဲအောင် ခွန်အား ရှိစေပါလိမ့်မယ်။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကျင်လည်လှုပ်ရှားနေရတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အနည်းနဲ့အများဆိုသလို ရှိနေပါတယ်။ ဒါကို ဖြေဖျောက်ပေးမယ့်သူက သင့်ရဲ့ချစ်ခင်သူပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ကင်းဝေးစေပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝတစ်ခုအတွက် ချစ်ခင်သူက မရှိမဖြစ်ပါ။
သင်နဲ့ သင့်ချစ်ခင်သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခင်မင်မှုတွေ၊ သံယောဇဉ်တွေ တိုးပွားလာပါတယ်။ အချိန်ကာလတွေက သင်နဲ့ သင့်ချစ်ခင်သူကြား တီးတိုး တိုင်ပင်တာကစလို့ ကြီးကြီးမားမား လုပ်ငန်းကိစ္စတွေအထိ ပြောဆိုနိုင်ပြီး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သစ္စာရှိမှုကို တည်ဆောက် ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ခေါင်းမာတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တော်ရုံနဲ့ အတွေးအခေါ် ထင်မြင်ချက် အသစ်..အသစ်တွေကို လက်ခံချင်မှ လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သင့်ချစ်ခင်သူက ပြောပြတဲ့အခါ သင်လက်ခံကောင်း လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ သင့်အတွေးအခေါ်တွေ ဆန်းသစ်စေဖို့ သင့်ကို တိုက်တွန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်မျက်စိနဲ့ ဦးနှောက်ကို တံခါးဖွင့်ပေးမယ့်သူက သင့်ချစ်ခင်သူပါ။
Posted by ကိုမျိုး at 12:48 AM
နေ့ရက်တွေကိုတန်ဖိုး ရှိစွာဖြင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
မြန်မာတိုင်း (မ်) ဂျာနယ်
မြန်မာ blog များ
ရေးသားခဲ့မိတာလေးများ
08/07 - 08/14 (8)
07/31 - 08/07 (24)
Online Casinos Visa football manager 2011 Spin palace casino FX SwissCasino
Pyuntaza, Bago, Myanmar (Burma)
ရေးသားသူ ..ကိုမျိုး(Pyuntaza). Simple theme. Powered by Blogger.